FITSARANA NY CEPE Mizotra araka ny tokony ho izy
Fanadinana BEPC Ny taranja kajy no tena manahirana ireo mpiadina
Mpiadina miisa 25 omaly tapak’andro maraina no tsy tonga namonjy ny fanadinam-panjakana BEPC ho an’ny foibem-panadinana CEG Antanimbarinandriana.
Nanomboka omaly alarobia 28 ny fitsarana ny fanadinana CEPE izay notanterahina ny talata teo manerana ny Nosy.
Ho an’ny foibem-panadinana CEG Ampefiloha manokana miaraka amin’ny lisea maoderna Ampefiloha dia nizotra an-tsakany sy an-davany izany. Tonga avokoa ireo mpitsara fanadinana miisa 153 raha ny fanadihadiana natao, asa haharitra roa andro. Misy mihitsy ny polisy miambina azy ireo mandritra izany. Nambaran-dRasoanjanahary Hery Vololona, anisan’ireo tompon’andraikitra ao an-toerana fa aorian’ny fitsarana dia manambatra ny taratasim-panadinana rehetra amin’ireo taranja miisa fito natrehin’ny mpiadina tsirairay avy ireo mpitsara. Mampiditra ny naoty ao anaty solosaina izy rahampitso zoma ka eny amin’ny CEG Antanimbarinandriana no hanatanterahana ny asa. Roso amin’ny fijerena ny naotin’ireo mpiadina tsara indrindra indray ireo mpikarakara aorian’io. Kasaina hivoaka mialoha ny alatsinainy kosa ny vokatra. Tsy ho an’ny fari-piadidiam-pampianarana rehetra anefa izany fa ho an’Antananarivo Renivohitra ihany aloha.